पाठ कागजातहरूका लागि शव्द पूर्णता
LibreOffice शव्दहरू संकलन गर्दछ जुन तपाईँले लगातार हालको सत्रमा प्रयोग गर्नुभएको थियो. जब तपाईँले संकलन गरिएको शव्दको पहिलो तीन अक्षरहरू पछि टाइप गर्नुहुन्छ, LibreOffice ले स्वत: शव्द समाप्त गर्दछ. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ संकलन शव्दहरूको हालको सूची बचत गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यो अर्को सत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ.
यदि स्वत:सुधार स्मृतिमा एक भन्दा बढी शव्द छ भने जुनले तीन अक्षरहरू जोडा मिलाउँदछ जुन तपाईँले प्रबिस्ट(type) गर्नुभयो, उपलब्ध शव्दहरू मार्फत घुम्नलाई CommandCtrl+Tabथिच्नुहोस् l उल्टो दिशामा घुम्नलाई, CommandCtrl+Shift+Tab थिच्नुहोस्l
शव्द पूर्णता प्रयोग गर्दा
पूर्वनिर्धारित द्वारा, तपाईँले शव्द पूर्णता स्विकार गर्नुभयो प्रविष्टि कुञ्जी थिचेर.
शव्द पूर्णता खारेज गर्न, अरू कुञ्जीद्वारा टाइपिङ गर्नुहोस्.
शव्द पूर्णता स्विच बन्द गर्दा
उपकरणहरू छान्नुहोस् - स्वतः गलत - स्वतः गलत विकल्पहरू - शब्द समाप्ति
सक्षम शव्द पूर्णता खाली गर्नुहोस् .
Title is: पाठ कागजातहरूका लागि शव्द पूर्णता